Waa muhiim in qofka uu codkiisa ku muujiyo goobo ka badan kuwa doorashooyinka guud.
Shacabka waa in ee lee yihiin fursado fiican ee ku arkaan, ku qeeyb qaataan iyo saameeyn ku yeeshaan hab-socodka go'aan gaarista siyaasada haddii ee donaan, xattaa inta uu dhaxeeyso doorshooyinka. Waxaa taasi lagu fulin karaa tusaale, in lala xariiro siyaasi, la saxiixyo aruurin-magaceed ama mudaaharaad.
Sido kale waxaad muhiim in qofka uu sameeyn ku yeelan karo go'aamada khuseeyo asaga ama arrimaha maalmeedkiisa. Tobannaankii sannadood ee ugu dambeeyay, waxaa la isku dayaayay in la kor loo qaado ka qeeyb galista demoqraddiyada la xiriirto suuqa shaqada, dugsiyada, qoysaska, ururrada iyo goobaha guryaha.
Kor u qaadka demoqraddiyada suuqa shaqada waxaa loola jeeda in shirkadaha iyo ururrada, ay fuliyaan sidii shaqaalaha uga qayb qaadan laahaayeen go’aamada. Dadka dhammaantood waa in ee helaan fursad ee saamayn ugu yeeshaan shaqadooda. Laakiinse weli go’aamada ugu danbeeyo badankood waxaa gaara madaxda.
Kobcinta demoqraddiyada ee dugsiyada waxaa loo jeeda in carruurta la baro, in arrimaha qaarkood ay aragtidooda ka bixiyaan oona is mas'uuliyad qaadan. Macallinku wax kasta go’aan kama gaari karo. Ardayda waxay ka qaybqaadan karaan qorsheyanta waxbarashada.
Kobcinta demoqraddiyada qoysaska waxaa loola jeeda in carruurta lagu barbaariyo, sidii ay u noqon lahaayeen dad madaxbanaan oo nabadgelyo leh. Waalidiinta badankood waxay la tashadaan caruurtooda, waxeeyna uu ogaladaan in ee ka qeeyb qaatan go'aamada khuseeyo arrimaha qoyskooda.
Ururro badan oo Iswiidhan ka jira waxeey mudo dheer ku dhaqmaayeen fikradaha shaqada ee ku dhisan demoqraddiyada. Waxay qaban nidaam u degsan sida shirarka iyo doorashada loo qabanaayo. Waa muhim in xubnaha oo idil ay codeeyn karaan. Codka xubin kasta waa isku qiimo.
Demoqraddiyada goobaha guryaha waxaa loola jeeda in dad,a ku nool ay xaq ku leeyihiin go’aan garida. Waxay go’aan ka gaari karaan waxyaalaha wadajirka loogu isticmaalo goobta guryaha.